एजेन्सी । बलिउडमा किंग खानको उपाधि पाएका अभिनेता शाहरुख खान दिनहुँ झन्झन् लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । उनको लोकप्रियता भारतमा मात्र होइन, विश्वभर उस्तै छ । पछिल्लो समय फिल्मबाट भनेजस्तो सफलता नपाएपनि कुनै न कुनै रुपले चर्चामा भने छन्। हालै शाहरुखले अर्को एउटा उपलब्धि हासिल गरेका छन् । यो उपलब्...
ललितपुर । प्रहरीको भ्यान दुर्घटना हुँदा एक जना असई घाइते भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट ललितपुरको फूलचोकीस्थित रिपिटर टावर हेर्न जाँदै गरेको प्रहरी टोली बोकेको भ्यान दुर्घटनामा परेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका अनुसार उक्त भ्यान आज मध्यान्न ढुङ्गामा चिप्लिएर करीब पाँच मिटर...
काठमाडौं । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका– १ सानुटारस्थित निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले आजबाट विद्युत्को उत्पादन परीक्षण सुरु गरेको छ । सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी काठमाडौंस्थित विद्युत्को केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको उक्त आयोजनाले आज...
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १२.०५ विन्दुले घटेर एक हजार १३६.९६ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.७६ विन्दुले घटेर २४९.१७ मा झरेको छ । दसैंको बिदालगत्तै आज दोस्रो कारोवार दिनमा कूल १५४ कम...
जनकपुरधाम । राजपाका सांसद प्रमोद कुमार साहले जनकपुर विमानस्थलमा कार्यालय तोडफोड गरेका छन् । उनले जहाज ढिलो भएको भन्दै उनले बुद्ध एयरको कार्यालय तोडफोड गरेका हुन्। सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका संघीय सांसद साह विमान ढिलो भएको भन...
बिराटनगर । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सबैको साझा भएको बताउँदै सबैले यसको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता गच्छदारले जनताको बलिदानबाट आएको यो व्यवस्थाबाट प्राप्...
एजेन्सी । ६० वर्ष यताकै ठुलो तुफानले यतिबेला जापानको जनजीवन तनावग्रस्त बनाएको छ । ‘हेगिबिस’ नामको टाइफूनका कारण अहिलेसम्म ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ६ दशकयताकै शक्तिशाली टाइफूनबाट बच्न राजधानी टोक्यो लगायत केही शहरका थुप्रै मानिस सुरक्षित स्थान तर्फ गएका छन् । शहरका भवन, रुख, सडकमा क...
राजविराज । डाक्टर नआएको भन्दै बिरामी र आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका छन् । अस्पतालका चिकित्सक अबेर सम्म पनि डियुटीमा नआएको भन्दै विरामीका आफन्त र केही विद्यार्थीले सोमबार राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा तोडफोड गरेका हुन् । विद्यार्थीको निरन्तर प्रदर्शनको कारण दिउसो २ बजे देखि अस्प...
अहिलेसम्मको अनुसन्धान यस्तो छ, भोली महराले अदालत समक्ष के भन्लान ?
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथी यौनदुर्व्यवहारको रोप लागेपछि पूर्व सभामुख महरालई प्रहरीले गत १९ गते पक्राउ गर्‍यो । असोज १२ गते (आइतबार) महराले आफूमाथि बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोषनी शाहीले सोमबार मिडियामार्फत घटना सार्वजनिक गरे...
एभरेष्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले २५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश (बोनसमा लाग्ने कर सहित) र ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेय...
मुस्ताङ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा केही दिनयता आन्तरिक पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको छ । असोज महीनाको सुरुआतदेखि नै पर्यटकको आवागमन बढेपछि यहाँका होटेलमा अग्रिम बुकिङ हुन थालेका छन् । पर्यटकको बढ्दो आगमनले यहाँका पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साहित बनेका छन् । पछिल्ला दिन घाँसादेखि लोमान्थाङसम्मका हो...